Galaxy A90 5G: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Izu gara aga anyị na-enweta ozi banyere Galaxy A90 5G. Ọ bụ nke mbụ Samsung dị n'etiti nwere 5G, ndị nkọwa ya nọ na-eri eri izu ndị a n'ọtụtụ oge. Ihe a niile mere ka anyị chee na ngwaọrụ ọhụrụ a ga-aga ahịa n'oge na-adịghị anya. O mechara mee, n’ihi na Samsung ewepụtala ya n’ihu ọha.
Koreandị Korea na-achọ ịbụ otu n'ime ntụnye aka na ekwentị 5G n'ahịa. Ha na-egosipụta n'ụzọ dị otú a Galaxy A90 5G, nke a na-akpọsa dị ka nke mbụ dị n'etiti na 5G na ahịa. Yabụ na ọnụahịa ya dị ala karịa ọtụtụ ekwentị 5G, nke bụ ihe nwere ike ịmasị ọtụtụ ndị na-azụ ahịa.
Ihe a na-agbaso usoro ahụ anyị hụrụ na nke a nke Galaxy A. Bet nzọ na a ihuenyo na notch n'ụdị a dobe mmiri na gị na ihuenyo. Igwefoto atọ na-echere anyị n'azụ, ebe a na-etinye ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo ngwaọrụ, ihe na-arịwanye elu.
1 Nkọwapụta Galaxy A90 5G
Nkọwapụta Galaxy A90 5G
Na ọkwa teknụzụ, Galaxy A90 5G a na-anọdụ na ezigbo akara n'etiti njedebe dị elu na nke kachasị dị n'etiti. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ ahụ na-eji Snapdragon 855 dị ka ihe nhazi, yana modem 5G ahụ siri ike. Ma na imewe ma ọ bụ na nkọwa ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ na ọ na-agbakwunyere ndị ọzọ na etiti dị ugbu a, ngalaba ebe enwere ọtụtụ ụdị na nke Samsung na-etokwa. Ndị a bụ nkọwa ekwentị:
Ngosipụta: 6,7-inch Super AMOLED nwere mkpebi Full HD + nke 1080 x 2400 pikselụ
Nchekwa dị n'ime: 128 GB (Expandable na microSD ruo 512 GB na ụdị 6 GB Ram)
Igwefoto na-abịa: 48 MP nwere oghere f / 2.0 + 5 MP nwere oghere f / 2.2 + 8 MP nwere oghere f / 2.2 obosara
Igwe n'ihu: 32 MP nwere oghere f / 2.0
Batrị: 4.500 mAh na 25 W ụgwọ ngwa ngwa
Sistemụ nrụọrụ: Akara gam akporo na UI dị ka oyi akwa
Njikọta: 5G, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, NSA
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ n'okpuru ihuenyo, NFC, Samsung DeX
Akụkụ: 164,8 x 76,4 x 8,4 mm
Arọ: gram 206
The Galaxy A90 5G egosiri dị ka ekwentị dị oke mkpa nye akara Korea n'ọhịa a. Ọ na-ahapụ anyị imewe yiri nke anyị ahụla n'ụdị ndị ọzọ na mpaghara a, ma enyo ya na azụ ya na usoro a na usoro. Ihuenyo dịkwa ukwuu, nke nwere sentimita 6.7 na nke a, nke nwere ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ya. Ihe nlere a putara ihe bu ihe mbu na nke a dika Samsung DeX.
Igwefoto azụ dị atọ, nke bụ dị ka Galaxy A50s, nke e gosipụtara n'ihu otu izu gara aga. Ha na-eme nke ọma na nke a, ọ bụ ezie na ikekwe ọtụtụ atụfuru igwefoto dị mma ma ọ bụ dị iche na ekwentị. Batrị ahụ nwere ikike nke 4.500 mAh, nke na-esikwa na ngwa ngwa 25W. Ya mere, ọ na-agbaso nke a n'ụzọ zuru ezu, site na ihe ị nwere ike ịhụ.
Galaxy A90 5G ga-ere ahịa echi na South Korea, dị ka ha kwadoro na Samsung. Ọ bụ ezie na ugbu a ọnụahịa nke ekwentị a ga-enwe na mbido ya na mba ahụ amaghị. Ya mere, anyị nwere olile anya ịmatakwu n'ime elekere ole na ole sochirinụ n'okwu a. A na-ewepụta ya na nsụgharị abụọ, yana 6 na 8 GB nke RAM na otu nchekwa ahụ. Naanị ụdị nwere 6 GB nke Ram nwere ohere ịgbasa nchekwa na microSD.
Samsung kwuru na a ga-amalite ekwentị n'ahịa ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya. Yabụ, ekwesịrị iche na Galaxy A90 5G a ga-aga ire na Spain. Mana anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ kwuputa ihe banyere mmalite a n'izu ndị a. Anyị na-echere ozi ọma n'aka gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Galaxy A90 5G: Nke mbụ nke etiti na 5G bụzi gọọmentị
A na-enwe Huawei Enwe 10 Plus n'izu a na China